Earn Somali - Digital Cosmos
Kusoo dhawow fursada iskaashiga Digital Cosmos. Hadda, waxaad ku kasban kartaa lacag adoo adeegsanaya fursadaha Suuqa Digital Suuqa adduunka oo dhan.
Uma baahnid inaad sugto inaad baratid Suuqgeynta Dijital ah. Uma baahnid inaad lacag iyo waqti ku bixiso intaas taas. Sidee? Siday u fududahay taas, ayaan adiga oo dhan kuu wada qabanay, waxaan kubixinay waqti, lacag iyo tamar si aan uga maareyno Suuqgeynta Digital-ka ee dhinacyada oo dhan. Hubi shahaadooyinkeena aabaha I V S PRASAD iyo gabadha ‘SRUTHI’, waxaan isku magac nahay DaFa iyo DaFa.Rocks sidoo kale waa degelkeena.
Marka Maxaa loo baahan yahay inaad ka hesho faa’iidadan oo ah bixinta dhammaan qaybaha Suuqgeynta Digital sida, Webdesign (Websaydhyada WordPress), Naqshadeynta Sawirka, Fiidiyowyada Suuqgeynta, SEO, Suuqgeynta Bulsho, Suuqgeynta Emailka, Suuqgeynta Mawduucyada, Xayeysiinta tooska ah ee internetka sida PPC google, xayeysiiska facebook. , xayeysiisyada youtube, xayeysiiska instagram iwm, Kor u qaadista iyo Imtixaanaadka, Dhismaha Xawaaladaha Iibka, Falanqaynta iyo Xogta specializaiton iyo ecommerce. qalab suuqgeyn sida sahaminta, gadaal quudinta, fiidiyowyada is dhexgalka iwm,,
Waxyaabaha kor ku xusan waa dhowr nooc oo fursado ah oo lagu bixin karo meherad yar gudaha iyo hareeraha deriskaaga ama qoyskaaga iyo asxaabta wareega ama adigoo la wadaagaya xiriiriyeyaasha xiriiriyaha otomaatiga ah ee la yaabka leh ee loogu talagalay in lagu wadaago warbaahinta bulshada ee facebook, whatsapp, youtube instagram iwm, oo leh bog si gaar ah loogu talagalay degista bogga si buuxda loogu diyaariyey xiriirada culus. Si laguugu bilaabo waxaad ka heli kartaa isku-darka 20% dhammaan faa’iidooyinka aan ka helno amarrada aad adigu soo gudbiso, shaqsi ahaan ama adoo adeegsanaya xiriiriyahaaga gaarka ah ee xiriiriyahaaga meel kasta oo adduunka ah oo adduunka ah. Falanqeeyayaasha wanaagsan, waxaan jecel nahay inaan wadaagno boqolley badan, oo ku kala duwanaan kara kiisba xaalad.
Ka soo wac _917760636363 adiga oo ka soo wacaya meel kasta oo dunida ka mid ah waqti kasta saacad kasta. Xubnaha kooxdayada u heellan inay soo jeedaan ayaa si weyn u soo jeedidoona si ay kaaga caawiyaan arrin kasta. Waad kula sheekaysan kartaa boggayaga Tawk.to/join sidoo kale waqti kasta oo aad rabto meel kasta oo aad rabto.
Kaliya iska qor diiwaanka oo raac tilmaamaha. wixii su’aal ah la xiriir [email protected]